Omen’ny Mponina ao Dhaka Karatra Mena Ny Ben’ny Tanàna Fa Tsy Mahavita Mifehy ny Aretina Entin’ny Moka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2017 2:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português, বাংলা
mponin'i Dhaka mampiseho karatra mena ho an'ireo ben'ny tanàna noho ny tsy fahitan'izy ireo vahaolana amin'ny valanaretina ateraky ny moka. Sary an'i Gazi Manjurul Alam Zuboraz. Fampiasàna nahazoana alàlana
Ny Sabotsy 15 Jolay 2017, nisy andiana mponina avy ao Dhaka renivohitr'i Bangladesh nanao fihetsiketsehana nanoloana ny Tranombakoka Nasionaly tao amin'ny sampanan-dàlan'i Shahbagh nampisehoan'izy ireo ny karatra mena ho an'ireo ben'ny tanàna ao Dhaka Avaratra sy Dhaka Atsimo noho ny tsy fahitàn'izy ireo vahaolana amin'ny fiparitahan'ilay aretina bemangovitra chikungunya entin'ny moka ao Dhaka.
Natsangana ny hetsika Facebook iray narahana antso ho an'ireo “mpanoratra, mpanakanto, mpianatra, mpampianatra, mpanao gazety ary olompirenena”, ka olona an'arivony no tonga namaly ny antso. Araka ny voalazan'ny mpitondra tenin'ilay hetsika, iray isaky ny Dhakaita folo no mety tratry ny aretina chikungunya ary miely toy ny valanaretina iray ilay aretina. Ny vanimpotoanan'ny talio farany teo dia niafara tamin'ny fitomboan'ny isan'ireo moka ary samy tsy nahavita naka fepetra mba hamongorana ilay olana daholo ireo tanàna roa tao Dhaka. Raha tsy voafehy ny moka, tandindonin-doza ny tanàna ka mety ho tratry ny bemangovitra mihitsy, hoy hatrany ny fanazavan'ilay mpitondra tenin'ny hetsika..
Pikantsary ahitana ireo mponina ao Dhaka mampiseho ny karatra mena, tao amin'ny pejy Facebook natao ho an'ilay hetsika. Sary an'i Sangita Ghosh. (Potsiro ny rohy raha te-hahita ny sary amin'ny endriny feno)
Ny Chikungunya (Tsikongonià ) dia aretina iray ateraky ny viriosy “chikungunya” izay moka roa karazana no manaparitaka azy hifindrafindra eny amin'ny olona: ny Aedes albopictus sy ny Aedes aegypti. Ny soritraretina dia ahitàna ny fanaviana, aretin'andoha, misalebolebo sy mandoa, harerahana, aretin-koditra, ary fanaintainana mafy mahazo ny nofo sy vanintaolana. Ny ratsy indrindra, na efa volana maro any aorian'ny fahasitranana aza, mbola mitoetra hatrany ny fanaintainan'ny nofo. Na manodidina ny 1 amin'ny 1.000 aza ny taham-pahafatesana, tsy zaka zakaina ilay aretina raha ho an'ireo tena mbola kely, sy ny efa zokiolona efa manana olana ara-pahasalamana.
Nararin'ny chikungunya i Harry Faisal ary manoratra ao amin'ny Facebook momba io aretina tsy zaka zakaina io :
Amin'izao fotoana izao, ny tanako havanana ihany no miasa. Mivonto ny hato-tongotro havia ary ny sandriko havia. Tsy afaka mamindra aho satria misy manaintaina tsy zaka any anaty lohako any.
Mangatakva vavaka amin'ireo namako aho, ireo mpiaramiasa ary ireo havan-tiana.
Olana miverimberina ny olan'ny moka ao Dhaka. Ireo mpisahana ny rano maloto mivangongo ao Dhaka, ahitàna rafitra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, no ianjeran'ny tsiny amin'ny fitomboan'ny isan'ny moka sy ny aretina entin'izy ireny. Samy noho ny fampanantenana hamongotra ny moka any amin'ireo tanàna roa ireo no nahazoan'ny ben'ny tanànan'i Dhaka Avaratra sy Dhaka Atsimo fandresena tamin'ny fifidianana.
Mokan'ny Chikungunya. Sary tao amin'ny Flickr an'ny CDC Global. CC BY 2.0
Niparitaka ihany koa tany amin'ireo faritra hafa ao Bangladesh ilay aretina ary nanitrikitrika ampahibemaso ireo manampahaizana amin'ny fahasalamana fa ilaina ny fahadiovana ao anatiny sy manodidina ny trano mba hamongorana ireo moka mpitondra ny aretina.
Vao haingana i Annisul Haque, ben'ny tanànanan'i Dhaka Avaratra no nahazo laza ratsy tamin'ny fanehoana hevitra hoe tsy afaka ny handeha hitsidika ny isam-baravarana ka hamono ny moka izy, ary ny olona no tokony handray fepetra mba hiarovany ny tenany tsy ho kaikerin'ny moka. Robin Ahsan, mpanoratra sy mpanonta boky, nanoratra tao amin'ny Facebook ho setrin'izany:
Tsia, ry Ben'ny tanàna, tsy misy olona niantso anao handeha hanamboatra ny lay aromoka isan-tokantrano. Nomena andraikitra ianao hamono ny moka ka araka izany tsy lay aromoka no takianay. Nanilika ny andraikitrao fotsiny ianao toy ny fanaon'ireo politisiana kapotsaka.
Nanontany i Kabir Ahmed, mpanao gazety:
Ny fanontaniako ho an'ny Ben'i tanàna, Annisul Haque, raha tsy afaka manamaivana ny fiainan'ireo olompirenena ianao amin'ny fitsaboana olana azo vahàna tsara, dia inona marina izany no tena asanao ?
Aretin-koditra mamely ny olona iray tratry ny chikungunya. Sary avy amin'ny olona iray mpampiasa Flickr, Pan American Health organization. CC BY-ND 2.0
Etsy andaniny, tsinian'ny ministeran'ny fahasalamana ireo mpitantana ny tanàna tsy nahavita nifehy ny fiparitahan'ireo aretina ateraky ny moka. Ny tao Dhaka Avaratra, efitrano 36 monja sy mpitsabo 279 ary ny ao Dhaka Atsimo, efitrano 56 monja sy mpiasa 284. Tamin'ny taona lasa, ny tetibola ho an'ny fifehezana ny moka tao Dhaka Avaratra dia 232.5 tapitrisa Taka monja ( 2.87 tapitrisa dolara amerikàna) ary tao Dhaka Atsimo dia 115 tapitrisa Taka monja ( 1.42 tapitrisa dolara amerikana). Azo antoka fa tsy sahaza izany ho an'ny Dhaka izay misy vahoaka 19 tapitrisa.
So valin'ny hatezeran'ny olompirenena tato anatin'ny fotoana vitsy, nohamafisin'ireo tanàna ireo ny fandaharanasany ho fifehezana ny moka, tamin'ny fanombohana hetsika manokana famonoana olitra moka ary fandroahana azy ireny tamin'ny setroka tany amin'ny faritra isankarazany tao an-drenivohitra. Wahiduzzaman Khan, mpiasan'ny banky, naneho hevitra hoe:
Efa mahazatra ny olona ireo olana sivily toy ny fifamoivoizana, ny moka, ny tsy fahampian'ny fitaterana, sns. Ireny mpanatanteraka any anaty biraom-panjakana ireny no mahazo tombony amin'io sy mampitarazoka azy. Mila mitaraina amin'ny feo avo isika ho fanoherana ary hamerenana an-dry zareo ireny hiverina hanao ny asany.
Nanao tohivakan'olombelona ireo mpanao hetsi-panoherana tamin'ny Sabotsy, teo ambanin'ny sorabaventy hoe “Mpanoratra, Mpihira, Mpianatra, Mpampianatra, Mpanao gazety ary Olompirenena” ary nifanaraka fa hampiseho ny karatra mena avy amin'izy ireo indray eo amin'ny birao foiben'ny fiadidiana ireo tanàna roa ireo raha tsy misy fandraisana fepetra sahaza.